Ubuchwepheshe - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
4 Amathiphu Okuhlela Amavidiyo Ephrofayili Odinga Ukuwazi
Ukuhlela kungenye yezinto ezinganakwa kakhulu ekukhiqizeni amavidiyo. Nokho, ingenye ebaluleke kakhulu. Yilokho okushintsha uchungechunge lweziqeshana ezingahleliwe zibe indaba! Nansi into nokho, ngokuhlelwa kwevidiyo. Uma uwenza kahle umsebenzi wakho, akekho oyoke abone ukuthi muhle kangakanani. Kunalokho, bazoba... Funda kabanzi
Mashi 25, 2022
Ezinye izindlela ze-Chromecast ongazicabangela ku-TV yakho
I-Chromecast imane ingobunye bobuchwepheshe obungcono kakhulu bokuphendula okuqukethwe kwabalingisi kusuka kufoni noma kuthebulethi yakho esikrinini esikhulu. Kulula kakhulu ukuxhumana ne-TV futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kodwa njengomsebenzisi, udinga ukwenza izinqumo ezihlakaniphile uma kuziwa ekutshaleni imali kunoma ibuphi ubuchwepheshe. Yiba... Funda kabanzi
Vikela impahla yakho yedijithali ngezixazululo zokuphepha ze-Kaspersky ohlelweni lokusebenza lwe-Airtel Thanks
Njengoba umhlaba wethu uya ngokuya uhlanganiswa nezwe eliku-inthanethi noma ledijithali, ubungozi bokuhlaselwa ku-inthanethi bugqama kakhulu. Njalo ngemizuzwana engama-39, kuba nokuhlasela kwe-inthanethi okwenzeka ndawana thize emhlabeni. Lokho kubalela ekuhlaselweni kwe-inthanethi okungaphezu kuka-2,200 ngosuku. Kuyinombolo ethusayo emhlabeni oshintshashintshayo ku-inthanethi... Funda kabanzi
Mashi 19, 2022
Izindlela Ezi-5 Ezilula Kodwa Ezisebenzayo Zokonga Amandla
Isingeniso Kulesi sihloko, sizocubungula amathiphu okonga ugesi azokusiza wehlise isikweletu sakho samandla. Bheka amathiphu awusizo nezigaba zamaqiniso ajabulisayo! Kungani Kufanele Uthole Izindlela Zokonga Amandla? Ingabe ngizokwazi ukukhokha isikweletu sami sikagesi kule nyanga? Ngemva kokukhokha isikweletu sami samandla, ngizoba... Funda kabanzi
Mashi 17, 2022
I-RPA noma i-Robotic Process Automation iguqule izimboni ezihlukahlukene ngokusiza izinhlangano ukuthi zonge isikhathi nomzamo owengeziwe ekwenzeni ikhwalithi, umsebenzi wokudala kunokumosha isikhathi ekwenzeni imisebenzi engafuneki, ephindaphindwayo. Kunamathuluzi amaningi e-RPA yezinga lezimboni amabhizinisi angawasebenzisa futhi enze imisebenzi ephindaphindwayo ukuze kuzuzwe uguquko olusheshayo lwebhizinisi. Kunamathuluzi amaningi e-RPA... Funda kabanzi
Kungani i-Dallas SEO Services iyisu elibalulekile lokumaketha leBhizinisi lakho
IDallas iyidolobha elikhulu lesimanje eTexas, e-United States, elaziwa ngokukhiqiza ukotini namafutha. Futhi iyisizinda sendawo samabhizinisi ezokuthutha, ezezimali, kanye namabhizinisi ezokuxhumana. Ngamathuba amaningi ebhizinisi ensimini, akungabazeki ukuthi i-Dallas SEO Services iyinto "enkulu" elandelayo. Ukuya ku-inthanethi kungenye ye... Funda kabanzi
Lonke ulwazi odinga ukulwazi mayelana nokulanda amafayela ku-inthanethi
Ngakolunye uhlangothi, i-inthanethi iyindawo yezigebengu kanye nenqolobane yokwaziswa okuningi. Izigebengu ze-Cybercriminal zenze ukuthola amafayela ku-inthanethi kwaba inkinga enkulu. Uhlelo olungayilungele ikhompuyutha luthelela ifayela elilodwa kwamathathu athunyelwe ku-inthanethi. Amagama okusesha afana nokuthi “dawuniloda i-msvcp140.dll” kanye ne-“msvcp140.dll download“ajwayelekile. Abakhohlisi abavamisile... Funda kabanzi
Amakhono Onjiniyela Wesitaki Se-Java Aphezulu ayi-10 aphezulu 2022
Uma ufuna ukusebenza embonini ye-IT, uzodinga unjiniyela we-Java onesitaki esigcwele. Onjiniyela ezinkampanini zanamuhla zobuchwepheshe badinga okungaphezu nje kwamakhodi. Futhi badinga ukuba abakhi bezixazululo, abahleli bezinhlelo, abahloli, nabaklami. I-Full Stack Java Developer uyisibonelo sikanjiniyela osuka ekupheleni osebenza nge-Java nokunye okuhlobene... Funda kabanzi
Ungakukhulisa Kanjani Ukuthengisa Kwakho Ku-inthanethi eCanada
Njengoba i-Canada iyizwe eselimusha ekukhangiseni kwedijithali, kungase kube nzima ukuqonda ukuthi ukumaketha kwedijithali kusebenza kanjani nokuthi ungakuthuthukisa kanjani ukuthengisa kwakho. Ukuthengisa ngedijithali kukusiza ukuthi ukhulise ukuthengisa kwakho ngokwandisa ukufinyelela kokuqukethwe kwakho. Ngokwenza abantu abaningi babe nentshisekelo kumikhiqizo namasevisi akho, ungathengisa... Funda kabanzi
Izinto ezinhlanu ezicatshangelwayo zokukhetha uhlelo lokuphatha inkontileka
Ubuchwepheshe busizuzisa ngezindlela eziningi njengoba sinezinketho eziningi esingakhetha kuzo lapho sikhetha izinqubo ezizenzakalelayo njengesofthiwe yokuphatha inkontileka. Ngezinketho eziningi ezitholakalayo, ukukhetha okufanelekile kungaba yinkimbinkimbi futhi kudideke. Uma udinga isofthiwe yokuphatha othintana naye ukuze ikusize uphathe izinkontileka ngempumelelo, uthuthukise ukusebenza kahle futhi ukhulise umkhiqizo wakho,... Funda kabanzi
1 2 ... 9 IZITHUBA EZINDALA